सावधान ! मोवाईल र कम्प्युटरमा धेरै झुम्मीनेको आँखै ड्यामेज हुन्छ | mulkhabar.com
सावधान ! मोवाईल र कम्प्युटरमा धेरै झुम्मीनेको आँखै ड्यामेज हुन्छ
December 26, 2017 | 11:27 pm 205 Hits
काठमाडौ, ११ पुस ।
आजको युग सूचना संचार र प्रविधिको युग हो । प्रविधिको उपयोग गर्न नजान्ने मानिस साँच्चै नै पाखे र जंगली भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर प्रविधिको उपयोग सहि तरिकाले गर्न नजान्दा के हुन्छ तपाईलाइ थाहा छ रु बलक देखि बृद्धसम्म अहिले सामाजिक संजाल र टिभी तथा मोवाइलमा झुम्मीने चलन बढ्दो छ । एकोहोरो मोवाईल र कम्प्युटरमा हेरिरहने व्यक्तिको आँखा अन्य मानिसको तुलनामा १० गुना चाँडै ड्यामेज भएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अत्याधिक कम्प्युटर र मोवाइल हेर्ने र खेल्ने मानिसलाई भिजन सिन्ड्रोम नामक रोग लाग्छ र अन्तत्वगत्वा आँखै काम नलाग्ने गरी ड्यामेज हुन्छ ।
यस सम्वन्धी नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आनन्द कुमार शर्माले लेख्नुभएको यो लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
हामीले गर्ने धेरै काम पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधिले निकै सहज बनाइदिएको छ । साना नाीहरुलाई र्‍याम्स सिकाउने, स्कूले विद्यार्थी पढ्नदेखि सबै कार्यालयहरुका काम कम्प्युटर, मोवाइलबाटै गर्न थालिएका छन् । साथै आजकल घरमा विभिन्न ब्रान्डका अत्याधुनिक प्रविधिजडित टेलिभिजनको स्थान उत्तिकै छ ।
हाम्रो आँखाको परेला माथि ४० वटा र तल्लो भागमा २५ वटा ग्रन्थी हुन्छन् । यी ग्रन्थीहरुमा असर पर्ने वित्तिकै भिजन सिन्ड्रोमका लक्षणहरु देखा पर्न थाल्दछ । पत्रकार, विद्यार्थी, बैंकर्स, कम्प्युटर इन्जिनियरहरु भिजन सिन्ड्रोमबाट बढी प्रभावित भएको पाइन्छ ।
प्रविधिले कामलाई निकै सहज बनाइदिएको छ नै के हामीले विचार गरेका छौँ रु लामो समय कम्प्युटर, मोबाइल चलाउँदा अनि टेलिभिजन हेर्दा हाम्रो आँखामा बिस्तारै असर परिरहेको छ ।आँखा सुक्खा हुने, पोल्ने, आँखालाई थकाई महसुस हुने समस्या अहिले बढ्दो छ । भिजन सिन्ड्रोम भनिने यस्ता खाले समस्या लिएर आँखा अस्पताल आउनेहरु अहिले बढिरहेका छन् । यस्ता प्रविधिलगायतका विद्युतीय सामग्रीको काँचबाट प्रवाह हुने किरणले आँखा सुख्खा हुने लगायतका समस्या बढ्दो छ ।
टेलिभिजन, कम्प्युटर लगायतबाट प्रवाह भएको किरणले थकान महसुस गराउनुका साथै आँखालाई सुख्खा बनाउँछ । आँखालाई स्वस्थ रहनका हाम्रो परेला झिम्कनु त्यति आवश्यक छ जति हामीलाई रगत प्रवाह गर्न मुटुको चाल र श्वासप्रश्वास फेर्नका लागि फोक्सोको खुम्चने र फैलने प्रक्रिया आवश्यक छ । लगातार कम्प्युटर, मोवाइल चलाउँदा अनि टेलिभिजन हेर्दा आवश्यक मात्रामा परेला झिम्किने प्रक्रियामा कमी आउदैँ जान थाल्छ र भिजन सिन्ड्रोमको समस्या हुन्छ।
परेली झिम्काउँदा आँखामा रहेको तरल पदार्थले नानी ९कोर्निया०लाई भिजाई मोइस्चर गराउँछ । नानीलाई मोइस्चरमा राख्दा भिजन सिन्ड्रोमको डर हुँदैन । सामान्यत एक मिनेटमा पन्ध्र पटक परेली झिम्कनुपर्छ । टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोवाइल चलाइरहेका बेला छ देखि आठ पटक झिम्कन्छ । निदाउँदा परेली छोपिनु पर्छ भने ननिदाउँदा आँखा निरन्तर झिम्किरहनु आवश्यक छ ।
धेरैजनालाई तातोचिसो मौसमअनुसारको कोठाको तापक्रम बनाई काम गर्ने वातावरण अनुकूल हुँदै गएको छ । एसी वा हिटरको प्रयोग गरि यी सामग्री चलाउँदा पनि आँखा सुख्खा हुने सम्भावना झन् बढी हुन्छ । लामो समयसम्म विद्युतीय उपकरण चलाउनेहरुलाई अझ बढी देखिने समस्या हुन्छ । बाहिरी मुलुकमा कामका लागि गएका युवाहरु जो लामो समय कोठामा बसेर एसी वा हिटरमा काम गर्छन्, उनीहरुलाई पनि यो समस्या बढिरहेको छ ।
त्यसैले काम गरिरहेका समयमा बीचबीचमा आँखालाई आराम दिने, आराम गर्ने, स्वच्छ पानीले बारम्बार आँखा सफा गर्ने, बाहिर टहलिने र पर्याप्त पानी पिइरहने गर्नुपर्छ । आँखा धेरै नै सुक्खा भएमा कृत्रिमरुपमा तरल पदार्थ निस्कने औषधि राखेर भएपनि आँखामा चिसोपना ९मोइस्चर० गराउनपर्ने हुन्छ। आँखा धेरै नै सुक्खा भएको अवस्थामा आइ ड्रप किनेर दिनको पाँच पल्टसम्म राख्न सकिन्छ । रिफ्रेसटियर भन्ने आइड्रप किनेर आँखामा राख्ने र चिकित्सकलाई देखाएर परामर्श लिनुपर्छ । धेरै समय एसि वा हिटरमा बसेर काम गर्न कम गर्नुपर्छ।
(वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ प्राडा शर्मा, विपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)